Madaxweynaha Hiiraan State oo maanta kulan muhiim ah la yeeshay Safiirka Yemen ee Soomaaliya.
Posted by admin on February 21 2011 11:28:13
Isniin 21,Feb 2011 (HSOL)-Madaxweynaha Hiiraan State oo maanta kulan muhiim ah la yeeshay Safiirka Yemen ee Soomaaliya.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hiiraan State ee Soomaaliya Dr. Maxamuud Cabdi Gaab ayaa maanta kula kulmay Muqdisho Safiirka dowladda Yemen u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya Ambassador Axmed Xamiid Cumar oo ay ka wada hadleen xaaladda Soomaaliya si gaar ah gobolada Hiiraan oo qalalaase dagaal iyo xaalad abaar ah ay ka jirto.
Madaxweynaha Hiiraan State ayaa uga sheekeeyay Safiirka Yemen in Xukuumadiisa ay horyaalaan howlo adag oo loo baahan yahay in laga gacan siiyo , si ay u suuragasho in ciidamada cusub ee dowlad goboleedkiisa ay diyaarsatay ay awood kagala wareegi lahaayeen dhulka Hiiraan oo haatan inta badan gacanta ugu jira kooxda Al-Shabaab.
Dr. Maxamuud Cabdi Gaab ayaa waxa uu ka sheekeeyay taariikhda fog ee Yemen ay ku leedahay dhulka Hiiraan , isagoo sheegay in dad asalkoodu yahay Yemen ay ku nool yihiin Hiiraan , kuna noolaan jireen , taasina ay muujineyso walaalnimada faca-weyn ee shacabka Yemen iyo dadyowga reer Hiiraan .
Madaxweynaha Hiiraan State , waxaa kaloo uu ku nuux nuuxsaday in dowladiisa ay ku jirto diyaargarow ,isqalabeyn iyo dejinta istiraatiijiyad dagaal oo kooxda Al-Shabaab looga xoreyn doono dhulka Hiiraan , waxaana uu ku tilmaamay Dr. Maxamuud Cabdi Gaab in Alshabaab oo kaashaneysa dagaalyahano aragagixiso ah ay ka dhigeen Magaalada Baladweyne ,Magaalada labaad ee ay ku hoydaan hogaamiyaasha ajaanibta ,ayna joogaan dagaalyahanada ugu badan ururkaasi ka dib magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya .
Madaxweynaha Hiiraan State , waxa uu farta ku fiiqay inuu ka guuleysan karo kooxda Alshabaab ee argagaxisada ah ee dagaal-gelisa caruur aan qaan –gaarin oo si qasab ah ay ku ciidameysay ,qaarkoodna lagu qasbay inay dilaan waalidiintooda,walaalahooda iyo dad kale oo qaraabo la ah oo diidanaa fikirka guracan ee kooxda lunsan ee Alshabaab.
Dr. Maxamuud Cabdi Gaab , waxa uu sheegay inuu ka sugayo dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya oo ay ugu horeyso Yemen sidii ay ugu gacan siin laheyd xukuumad goboleedkiisa qorshaha ammaan ku soo dabaalida Hiiraan ,si ay bilow nabadeed ugu noqoto gobolada dhexe iyo kuwa koonfureed oo colaad dhiig badan ku daatay horey u soo maray .
Madaxeynaha dowlad goboleedka Hiiraan State , waxa uu u rajeeyay Madaxweynaha ,dowladda iyo shacbiga Yemen horumar iyo barwaaqo , waxaana uu ugu duceeyay nabad,midnimo iyo inuu jawi isfaham leh ku dhamaado banaanbaxyada ka soconaya Yemen ,waxaana uu uga digay dadka banaanbaxayaasha in dalkooda Yemen aaney u horseedin burbur la mid ah kan ku dhacay dalka Soomaaliya ,ayna muujiyaan wadaniyad,dal jaceyl,dowlad jaceyl iyo diin jaceyl ,dhegahana ka fureystaan baaqyada wadamada shisheeye ee fitno abuurka ah .
Safiirka Yemen ee Soomaaliya Mudane Axmed Xamiid Cumar ayaa madasha kulanka ka sheegay inuu ka murgoonayo in colaada Soomaaliya ay 21 sano jirsato , isagoo xusay in dowladda Yemen aaney ka gaabin doonin kaalmeynta dowlad goboleedka cusub ee Hiiraan State, ayna filanayaan in xasilooni ka dhacda Hiiraan ay qeyb ka noqon doonto guud ahaan deganaanshaha Soomaaliya, taasina uu ku micneeyay inay noqoneyso horumar la filan karo oo dhanka wanaaga ah .
Kulanka Safiirka Yemen ee Soomaaliya iyo Madaxweynaha Hiiraan State ayaa ku soo idlaaday jawi isfaham leh , waxaana loo balamay kulan kale oo deg deg leh sida ugu dhaqsaha badan .